Xafiiska xoolaha beeraha iyo Horumarinta Reermiyiga DDSI oo Maanta u Raray qabalka, talaalka iyo daawaynta xoolaha 68 degmo ee DDSI. - Cakaara News
Xafiiska xoolaha beeraha iyo Horumarinta Reermiyiga DDSI oo Maanta u Raray qabalka, talaalka iyo daawaynta xoolaha 68 degmo ee DDSI.
Jigjiga(CN)Khamiis Jan29-2015. Xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga DDSI oo ka tuulaya meel marinta hirgalinta hayaanka qorshayaasha horumarineed, kor u qaadida nolosha bulshada xoola dhaqatada ah iyo kuwa xoola dhaqato beeralayda ah ayaa bilihii ugu danbeeya qaaday dalaal dheer oo lagaga midho dhalinta qorshayaashaasi.
Haddaba mar uu maanta wariyaha shabakada wararka ee cakaarNews booqday xarunta kaydka bakhaaradaxafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI ayaa waxa uu halkaasi kula kulmay baabuurta waawayn ee xamuulka ah oo daabulaysa itamyo iskugu jira qabal talaalka iyo daawaynta xoolaha oo loo rarayay dhamaan degmooyinka deegaanka.
Waxaana uu wariyuhu halkaasi kula kulmay isaga oo xiligaasi ku jira shaqada raritaanka dawooyinka sida uu amarka madaxwaynekuxigeenka marwo sucaad ku xusnayd si loo dadajiyo wakhti ku haboon sidii dawooyinka xoolaha loo gaadhsiin lahaa dhamaan gobolada iyo degmooyinka. Gadhwadeenka Geedi socodka maamulka lacagaha hantida iyo adeeg’bixinta ee xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI mudane Rashiid Cabdi Daahir.
mudane Rashiid Cabdi Daahir. Wuxuuna masuulku sharax balaadhan ka bixiyay itamyadan lagu daabulayo baabuurtu waxa ay ka kooban yihiin goobaha loo wada iyo ahmiyada ay bulshada xoolo dhaqatada deeganku u leeyihiin.
Masuulku isaga oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yidhi “si loo daboolo baahiyaha aasaasiga bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqata beeralyda ah, islamarkaana loo tir tiro cudurada faafa ee aafeeya xoolaha nool ee isaga goosha masaafooyinka. Ayaa waxa uu xafiisku bilihii ugu danbeeyay sii xoojiyay hirgalinta qorshayaashii u yaalay xafiiska, itamyadan maanta la rarayaana waxay iskugu jiraan qabalka talaalka xoolaha iyo daawaynta xoolaha deegaanka oo loo rarayo 68 degmo ee uu deegaanku ka kooban yahay lana gaadhsiindoona ilaa heer tuulo, Tuulo hoosaad”.
. gadhwadeenku waxaa kale oo uu sheegay in gaadhsiinta daawooyinka bulshada xoola dhaqatada ah oo 2dii sano ee ugu danbaysay uu ku iman jiray dib u dhac. balse sanadkan dadaalka dheer oo ay galeen hogaaminta sare xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI ay ku hirgaliyeen in xiligii loogu talagalay la gaadhsiiyo dhamaanba bulshada xoolo dhaqatada ee degmooyinka deegaanka.
dadaaladan balaadhan ee uu xafiisku qaatay bilihii ugu danbeeyay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili lagu jiro xusitaanka xuska maalinta xoolo dhaqatada mid deegaan iyo mid heer qaranba ah. iyada oo sanadkan lagu xusay caasimada deegaanka ee canfarta ayaa waxaa xusid mudan in xoolo dhaqatada deeegaanku ay noqdeen xubnihii ugu badnaa deegaanada dalka ee uu Raysi wasaare dalku mudane Hailemariam desaleg gudoonsiiyay abaal marintii ugu badnayd taasi oo tilmaamaysa dadaalada uu xafiisku ugu jiro kor u qaadida nolosha bulshada xoola dhaqatada ah taasina ay tahay tan keentay in bulshadeena xoolo dhaqadata ahi u noqdaan dhamaanba deegaanada dalka muunad hormuud ku dayasho mudan tusaalana laga qaato .
Isku soo wada duuboo waa markii ugu horaysay ee xilli ku haboon la gaadhsiiyo dawooyinka xoolaha 68da Degmo.9a Gobol iyo 4ta maamul magaalo